Uhlaselo lwabanqolobi olwenzeka eMali Le Campement Kangaba Resort
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseMali eziQhekezayo » Uhlaselo lwabanqolobi olwenzeka eMali Le Campement Kangaba Resort
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseMali eziQhekezayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku
Abakhenkethi baseNtshona bayathanda ukuhlala eLe Campement Kangaba Resort, kwimpuma yedolophu enkulu iBamako eMali yaziwa phakathi kwabakhenkethi basentshona abanamagumbi anomtsalane, ukutya okumnandi nokunempilo, igadi yase-Eden kunye namachibi okuphupha.
Namhlanje le ndawo yokuphumla yajika yaba yindawo yotyelelo olubi xa yaqala phantsi kwemipu ebulalayo ngabagrogrisi. Ngethamsanqa iindwendwe ezingama-32 zehotele zikwazile ukubaleka ziphume ehotele ezaziphantsi kohlaselo lwemipu. Iindwendwe ezimbini, nangona kunjalo, zasweleka kuhlaselo, phakathi kwabo ingummi waseFrance-ongummi waseGabon.
Ngokwenkonzo yezokhuseleko, "omnye wabanqolobi ukwazile ukubaleka, emva kokonzakala". Ushiye ngasemva umpu womatshini kunye neebhotile ezizaliswe "zizinto eziqhumayo".
Ubuphathiswa buthe abanye abantu ababini bonzakele, kubandakanya nommi.
Kwangenelela imikhosi ekhethekileyo yaseMaliya, ixhaswa ngamajoni e-UN kunye nemikhosi evela kumkhosi wokulwa nobunqolobi waseFrance. Umzi wozakuzo wase-US wayelumkise ummi wase-US ukuba aye eMali kutshanje nge-9 kaJuni.